अर्थबजार – Page2– Himalaya TV
Home » Archive by category "अर्थबजार" (Page 2)
विनोद आचार्य काठमाडौं । एकपछि अर्को सपना र योजना दिईरहेको सरकारले नयाँ बर्षमा काठमाडौंवासीलाई ठूलै उपहार दिन चाहेको छ । यदि कुनै चमत्कार भएन भने सरकारको उपहार सडकमा होइन, कागजमा मात्र देखिनेछ । सरकारले उपत्याकावासीलाई दिन चाहेको उपहार के थियो र यसमा के काम हुँदैछ ? मंसिर मसान्तभित्र यातायात क्षेत्रको सिन्डकेट अन्त्य गर्ने सरकारको […]
लेखा परीक्षणको काममा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको निर्देशन किन?
२२ पुष २०७५, आईतवार १७:३२
काठमाडौं, २२ पुस । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कर छली हुन नदिन पनि निजी क्षेत्रको लेखा परीक्षणको काममा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिने कानुनी व्यवस्था गर्नु परेको बताएका छन् ।
तेस्रो निर्यात दिवस मनाइँदै
काठमाडौं, २२ पुस । ‘नेपाली वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान’मा जोड दिंदै तेस्रो निर्यात दिवस मनाइँदै छ ।
वाइडवडी प्रकरणमा उपसमितिकाे प्रतिवेदन विवादमा
२१ पुष २०७५, शनिबार १२:०७
आनन्द अधिकारी काठमाडाैं । उपसमितिले वाइडवडी विमान खरीदमा अनियमितता भएको प्रतिवेदना तयार पारेपनि यस विषयमा लेखा समितिमा विवाद देखिएको छ । यो सँगै लेखा समितिले अव प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्ने भएको छ । र , यसका लागि सोमवार बैठक बोलाइएको छ । उपसमितिले बुधवार बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न शुक्रवार लेखा समितिको बैठक बसेको थियो । तर, […]
वाइडबडी र चौधरीको शपथले देशमा ह‌ंगामा, प्रधानमन्त्री उखान टुक्कामै भ्याइनभ्याइ
२० पुष २०७५, शुक्रबार १३:०७
मनिका खतिवडा काठमाडाैं । वाइडबडी खरीदमा भएको अनियमतता र रेसम चौधरीको शपथ ग्रहण अहिलेको हटकेक विषय हो । यी दुई विषयले देशमा तंरग फैलाएको छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भने सार्वजनिक भाषणमा उखान टुक्का र रमाइलो गर्न नै भ्याइनभ्याइ छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले ललितपुरको बालकुमारीमा निर्माण गर्न लागेको पानी प्रशोधन केन्द्र […]
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूकाे मुद्धती निक्षेपमा राष्ट्र बैंकले डेढ अर्ब लगानी गर्ने
१९ पुष २०७५, बिहीबार १५:५३
काठमाडौं, १९ पुस । नेपाल राष्ट्र बैंकले, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूकाे मुद्धती निक्षेपमा डेढ अर्ब लगानी गर्ने भएकाे छ ।
१९ पुष २०७५, बिहीबार ११:१०
काठमाडौं, १९ पुस । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ ।
जुत्ता तथा चप्पल औद्योगिक प्रदर्शनीमा उपभाेक्ताकाे आकर्षण बढ्दो
१८ पुष २०७५, बुधबार १७:३८
काठमाडौं, १८ पुस । शुक्रबारदेखि काठमाण्डौको भृकुटीमण्डपमा जारी जुत्ता तथा चप्पल औंद्योगिक प्रदर्शनीमा उपभाेक्ताकाे आकर्षण देखिएकाे छ ।
केबलकार सञ्चालक चन्द्रागिरि हिल्सले साधारण शेयर बिक्री गर्ने
१७ पुष २०७५, मंगलवार १६:१९
काठमाडौं, १७ पुस । चन्द्रागिरि केबलकार सञ्चालन गरिरहेको चन्द्रागिरि हिल्स प्रालिले रु १५ करोड बराबरको १५ लाख कित्ता साधारण शेयर बिक्री गर्ने भएको छ ।
शेयरको मूल्य आज पनि ओरालो
१७ पुष २०७५, मंगलवार १६:१३
काठमाडौं, १७ पुस । धितोपत्र बजारमा आज पनि शेयरको मूल्य घट्ने क्रम रोकिएन ।